ပြီးခဲ့သော ကဗျာတပုဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ပြီးခဲ့သော ကဗျာတပုဒ်
Posted by kai on Feb 15, 2010 in Business & Economics, Critic, Poetry |2comments
aung san Chinese New Year saint valentine Washington’s Birthday
ဒီနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅ရက် မနက်အီးမေးလ်ဖွင့်တော့ တွေ့ရတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ပါ။ အင်တာနက်ထုံးစံအတိုင်း ဖေါ်ဝဒ်တွေလုပ်လာတာမို့ ရေးသူက ဘယ်သူလည်း မသဲကွဲပါဖူး။အင်တာနက်မှာ ဂိုဂယ်ရသလောက်တော့ ရေးသူဟာ “ဟယ်ရီလွင်” ဆိုပါတယ်။ ဘိုဆန်ဆန် ကဗျာနံမယ်လေးပေါ့..။အောက်မှာ ကဗျာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာက အနုပညာပါ ..လှလွန်းတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့..ဒီကဗျာဖတ်မိပြီး အတွေးထဲမှာ စီကာဆင့်ကာ ပေါ်လာတာတွေအများကြီးပါပဲ။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂ ကပြည်ထောင်စုနေ့၊ ၁၃ ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့။ ၁၄ က ချစ်သူများနေ့၊ ဒီနေ့ ၁၅ ရက်နေ့ကတော့(အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ) သမ္မတကြီး ၀ါရှင်တန် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ သမ္မတများနေ့ ဆိုပါစို့။ ( ဖေဖေါ်ဝါရီရဲ့ တတိယပါတ် တနလာင်္နေ့)။
ကြားထဲဒီနှစ်က ထူးခြားတာရှိပါသေးတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ ချစ်သူများနေ့က တရုတ်လုနာ(Lunar) နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ချစ်သူများနေ့ကတော့ ကမ္ဘာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေ့ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ရက်နေ့တွေကတော့ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေ၊ လူမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက….ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ရက်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေ ဗမာတွေအတွက်တော်တော်ထူးခြားတယ်ဆိုရမှာပါ။ အခုလိုစီးပွားရေးထိခိုက်နေတဲ့ခေတ်ကာလမှာ (ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာကစလိုက်တဲ့)ဈေးဝယ်ရာသီရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့  “ဗယ်လင်တိုင်းနေ့” ဟာ နိုင်ငံရဲ့ ကိန်းဂဏ္ဍန်းညွှန်းတန်းတွေအတွက်လည်း အင်မတန် အရေးပါပါတယ်။
အဲဒီနေ့ထူးတွေကို တခုနဲ့တခု ချေဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာထက် ချိပ်ဆက်အင်အားကူဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားတာက ပိုမကောင်းပေဘူးလား တွေးမိတာပါ။ သဘောက ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူခင်သူမြတ်နိုးသူတွေ အချင်းချင်း …ပျော်ပျော်နေ၊ များများသုံးရင်း များများချစ်ကြပြီး ရှိနေတဲ့၊ လာမဲ့၊ လာလတံ့ သော မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို၊ ၀ါရှင်တန်လိုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစိတ်ဓါတ်တွေ (နေ့ရက်တွေနဲ့အတူ ပါလာမဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ)မမေ့မလျှော့..ရိုက်သွင်းမောင်းနှင်ဖို့ ပါပဲ..။
ကဒ်ကလေးတွေ၊ ပန်းကလေးတွေ ..
… တွေ၊ …. တွေ
အများကြီး အများကြီး ..
လူငယ်တွေလဲ … အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်
လူလည်တွေလဲ … ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်
ဂရေဂိုရီယံ ကမ္ဘာသုံး နေပြက္ခဒိန်ရဲ့
၄၅ ရက်မြောက်နေ့ …
ချစ်သူတွေကို တိတ်တဆိတ် လက်ထပ်ပေးတဲ့
တာနီမြို့က Saint Valentiuns ဆိုတဲ့
တို့တွေနဲ့ အဝေးကြီးပါကွယ် …
ဟိုး အညာက နတ်မောက်မြို့မှာ ..
အဲဒါတွေ အားလုံးထက်ပိုပြီး …
သူ့မှာ အကုန်ရှိသတဲ့ ….
ဘာမှ ယူမသွားရှာလေတဲ့ ….
မိခင်ဒေါ်စု သား …’
ဆိုခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေး …
ဖြစ်လာတဲ့ ‘ဗယ်လင်တိုင်းနေ့’ ဆိုတာထက် ..
အဓိပ္ပာယ် ရှိပါတယ်ကွယ် …
လောကမှာ အရေးအကြီးဆုံးက အရေးမကြီးတာတွေကိုအရေးတကြီးမလုပ်မိစေဖို့ပါ………
ဖတ်ရတာ အသိတရား ပွင့်လင်းလာတယ်
ကျွန်တော် လည်း ၁၄ ရက်နေ့တုန်းက ချောကလက် ကိုပဲစိတ်ထဲ
၁၃ ရက်နေ့က အကြောင်းအရာတို့ကိုတော့ အရှက်တရားမဲ့စွာ မေ့လျော့ခဲ့မိတယ်